Ururka isutagga Saxafiyiinta ee caalamiga ah ee IFJ oo si kulul u canbaareeyey xarigga weriye Faysal Boston. – Radio Daljir
Ururka isutagga Saxafiyiinta ee caalamiga ah ee IFJ oo si kulul u canbaareeyey xarigga weriye Faysal Boston.
Brussels, July 05 – Ururka Caalamiga ah ee isutagga Saxafiyiinta caalamiga ah ee International Federation of Journalists (IFJ) ayaa war-bixin uu soo saaray si kulul ugu canbaareeyey xarigga wariye Faysal Maxamed Xasan ( Boston), iyadoo Puntland weriyahaasi ku riday xukun hal sano ah.
Wariyey Faysal Maxamed Xasan ayaa u shaqaynayey Website-ka Hiraan Online (HOL), waxana lagu eedeyey in uu khatargelinayey amaanka Puntland islamarkaana faafinayey warar been abuur ah.
Hadalka uu soo saaray ururka caalamiga ah ee isutagga saxafiyiinta ee IFJ ayuu waxa uu dalbaday in weriyahaasi si deg-deg ah xoriyadiisii dib loogu soo celiyo oo go?aanka xabsigiisa dib looga noqdo, iyadoo la eegayo madax-bannaanida saxaafada.
?Waxaanu ka xunnahay go?aanka naxariis-darrada ah ee maxkamadda ka dhanka ah Weriyaha, waxaana ku baaqaynaa in dib looga noqdo arrintaas” sidaas waxaa yiri Beth Costa oo ah xoghayaha guud ee ururka caalamiga ah ee isutagga Saxafiyiin IFJ.
Tan iyo markii ay Puntland qabtay weriyahaasi kaddibna xukunka ku riday waxaa isasoo tarayey dalabka ku aaddan siidayntiisa iyadoo ayba jireen canbaarayn iyo dhaleecayn ku aaddan xariggiisa.
Ururka heer qaran ee saxafiyiinta Somaliyeed ee NUSOJ iyo midka Puntland ee MAP ayaa isaguna ka horyim xarigga weriye Faysal Maxamed Xaysan dalbadayna in xorriyadiisii loo soo celiyo.